सरकार र डा केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन - Safalnews
सरकार र डा केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन
सफल न्युज द्वारा २०७७ आश्विन २२ गते बिहीबार २०:१८ मा प्रकाशित
काठमाडौं– अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि सरकार र डा केसीका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।
आज विहान र दिउँसो ४ बजेपछि शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठक निकर्षविहीन भएको हो । लामो छलफलपछि पनि वार्ता नटुंगिएपछि शुक्रबार पुनः छलफल गर्ने शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।
वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा दिलीप शर्मा थिए ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै डा केसीले भदौं २९ गतेदेखि अनसन शुरु गरेका थिए । डा केसीको अनसनको बिहीबार २५ औं दिन हो । लामो समयदेखि अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।
के थियो डा केसीको १९ औं अनसनको माग ?
डा केसीले मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने, कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
त्यस्तै डा केसीले आफ्ना मागमा बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारवाही गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
यसअघि डा. केसीले १८ औं अनसन सीमा विवादको विषय चर्किएकाले आफैंले अनसन तोडेका थिए ।